Igumbi lokuhlala elinamavili asekhaya lokunyusa usana lokunyuka kunye nokuveliswa | Yiya
Kumgangatho amagwebu Mat
Igumbi lokuhlala elinokugoqeka ngokuxinana kukhuphuka umntwana
I-XPE yabantwana idlala umatshini, uxinizelelo oluphezulu, amandla aphezulu, ukubuyela okuhle, ukusebenza ngokukuko kokugqwesa. iimveliso zithunyelwa eYurophu, eJapan, eRashiya, mpuma Asia nakwamanye amazwe unyaka wonke. Iimveliso ziye zaqinisekiswa yi-European Union SGS kunye nemigangatho yokhuseleko ye-3C.
Imveliso igama: Umdlalo wokudlala wabantwana
Ubude obuqhelekileyo kunye nenqanaba: 1.8m, 2.0m okanye wena
Ubukhulu Standard: 8mm, 10mm, 15mm, 20mm okanye wena
Ukupakisha: Ingxowa, ibhokisi yesipho ephathekayo
Phawu: Anti-slipEco-friendly, okungangenwa, umhlwa- Resistant, imibimbi- Resistant, Anti-, luthambe
Isicelo: Abantwana, abantwana abasafundayo, Igumbi leentsana kunye neYym Exercise Gym
I-XPE yinto enobuhlobo kwindalo. Xa kuthelekiswa ne-EPE, i-XPE inexinano ephezulu, i-elasticity elungileyo, kunye nokhuseleko oluphezulu. Ayizukulimaza ulusu lwethenda lomntwana. Ukongeza, i-XPE ekhasa imethi inokuqina okuhle, amandla aphezulu okuqina, kunye nokuqina ngakumbi.
Igama Igumbi lokuhlala elinokugoqeka ngokuxinana kukhuphuka umntwana
Izinto eziphathekayo I-XPE
Uhlobo Ukhetho ezahlukeneyo
Ubungakanani Ubungakanani obuninzi bukhona
Iimbonakalo Non-Ityhefu, okungangenwa, zihlambeke, Luhlala, Non-zelanga, zikhululekile
Izatifikethi EN71-3, CE, Sedex
Icala A: Ibhere encinci ikhwele ibhayisekile Icala B: linganisa ubude
Icala A: Izilwanyana kunye namanani Icala B: linganisa ubude
Icala A: Ukuhamba ngebhayisikile kwindlela esecaleni B: Koala encinci
Icala A: Kancinci iKoala Icala B: iPegasus encinci
Icala A: Bear Ibhaluni Icala B: Izilwanyana kunye namanani
Emva koyilo oluphindaphindiweyo, inkangeleko ilula kwaye intle
Kukhuselekile kwaye akunambitheki, abasetyhini abakhulelweyo / abadala / abantwana banokuyisebenzisa ngokuzithemba.
Ubuninzi obahlukeneyo onokukhetha kubo
Ukuthintela ubushushu kwaye ungancamathelisi abantu ehlotyeni
Gcina kude nokubanda kunye nokufuma ebusika
Imigca yokutyibilika, ukugaqa kosana ngaphandle kokutyibilika: ukuthungwa kulungelelaniswe ngokulinganayo kumphezulu wemethi, kwaye unyawo alutyibiliki
Kulula ukuyicoca, ubumdaka buhambile kunye nokusula okukodwa: umphezulu awunamanzi kwaye awunamabala, amabala obisi kunye namachamo emchamo awayi kutyibilika, ukunciphisa ukukhula kweentsholongwane.
Iipatheni ezahlukeneyo kumacala omabini, Inxalenye enye yeziqwenga ezibini eziphezulu. ipateni iprintwe kumaleko wangaphakathi wefilimu ye-matte, ekhuselekileyo ngaphandle kokudibana ngqo nolusu lomntwana.
Isatifikethi sokuvavanywa kombutho esigunyazisiweyo siqinisekile ngakumbi
Xpe ukukhasa mat kuyinto esemgangathweni ukukhasa mat. Ubume bendalo kunye nokungabinetyhefu. I-foam ye-PE, inobuhlobo kwindalo, ayinayo ityhefu, akukho vumba, okwangoku iyaziwa njengezinto ezinobungozi kwindalo esingqongileyo; ayizukubangela naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga kulusu lwethenda lomntwana
Egqithileyo I-B6-PLUS yasekhaya yeBluetooth yokusonga iTreadmill
Okulandelayo: Iiseti ezili-11 zomsebenzi wokuzilolonga ngentambo
Ihowuliseyili iipateni zamagqabi eva foam umgangatho mat
I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba, Ingxowa yeYoga yokuHamba, Ingxowa yeYoga yeSling, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, iphazili yomthambo,